Ireo loharano mifanohitra amin'ny fahaiza-miaina | Martech Zone
Loharano mifanohitra amin'ny fahaiza-miasa
Alakamisy Janoary 1, 2009 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Sendra horonan-tsary iray aho Tony Robbins at TED tena nanentana ny fanahy izany. Ny iray tamin'ireo andalana nosoratany dia tena nanjary marina tamiko:
Ny iray amin'ireo asa tena nahafa-po ahy dia ny fananana consultant Integration ExactTarget. Tamin'izany fotoana izany, ny ExactTarget dia nanana fampiasa fampiasa fampiharana (API) somary voafetra ihany saingy nitombo ny fahaizanay sy ny mandeha ho azy ny mpanjifanay. Isan'andro dia fihaonana tamin'ny mpanjifa izay nanana olana sarotra dia sarotra, ary ny asako dia ny famahana ny olana amin'ny alàlan'ny API tsotra anay.
Ny ankamaroan'ny fahombiazako tamin'izany dia izaho foana namantatra fomba hanatanterahana ny tanjona farany. Raha ny API Tsy nanohana fomba manokana, hampiasa fitambarana angona sy antso aho handresena azy. Indraindray ny vahaolana dia feno fahendrena (ary naka fahatokisana ny ati-doha hamaha). Izahay dia nandroaka ny sasany tamin'ireo voa ny mpiasa mpamokatra satria an-tapitrisany ny vahaolana API antso hamita ilay asa.
Ny lakilen'ny fahombiazako mitohy dia ny tsy fahitako matetika hoe 'tsia', raha sanatria. Indraindray ianao dia mila manova ny làlana mankany amin'ny toerana haleha. Làlana iray dia loharanom-pahalalana. Raha tsy misy izany dia mila mahay mandanjalanja ianao ary manangana ny anao manokana!
Tsy manana loharanon-karena fialan-tsiny tsy ahavitana zavatra. karokaroka dia ny fahaizana mitady fitaovana hahazoana zavatra vita, na inona na inona loharano!
Ity ny famelabelarana feno an'i Tony Robbins ao amin'ny TED. Fampitandremana: mampiasa expletives miloko be dia be izy.
Misaotra Angela Maiers ho an'ny mahita!
Tags: Krismasymailaka marketing roitantaran'ny fahazoana mivarotramandray vahinymakarakaramilina makarakarateknolojia fivarotana
Tafintohina ve ianao?
Facebook no AOL Vaovao
Jan 2, 2009 ao amin'ny 4: 05 AM
Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity aho, ary nihaino ny kasety Robbins, dia nijery ireo fanapahan-kevitro taona vaovao aho, nandrovitra azy ireo ary nanoratra fanapahan-kevitra vaovao iray monja: "Vitao fotsiny". Jereo fa tsy nilaza aho hoe: "Ataovy fotsiny".
Fony aho mpanantanteraka varotra sy nanakarama mpitantana ny varotra dia nolazaiko azy ireo foana fa ny asan'izy ireo dia ny mivarotra fa tsy mivarotra izany. Ny fahasamihafana dia ny fampiasana ny loharanom-pahalalana azo ampiasaina rehetra hanidiana ny varotra ary raha tsy eo ny loharano hamoronana azy ireo na ho lasa mahay mandahatra araka ny filazanao.
Ity dia lahatsoratra tsara hanombohana ny taona.
3 Jan 2009 amin'ny 1:46 PM
Inona no fomba tsara indrindra ahatakarana ny ekipanao & hamaly an'io fanentanana io?
Inona no azoko atao mba hampianarana izany amin'ny fomba mahomby?
3 Jan 2009 amin'ny 2:52 PM
Manomboka amin'ny leadership, Derek. Mpitondra mahay manala tsiny ny fialantsiny. Tsy maninona ny milaza hoe 'tsia', saingy tsy tokony ho tsara mihitsy ny miteny hoe 'tsy afaka izahay satria…'. Raha fantatry ny orinasa fa tokony hanao zavatra izy ireo, dia mila mahay mandanjalanja amin'ny fomba ahoana.
2 Jan 2009 amin'ny 2:11 PM
Misaotra nizara ity iray ity - manome aingam-panahy sy mahasoa.
2 Jan 2009 amin'ny 4:40 PM
Vitao fotsiny araka ny lazain'ny SMB. Ny iray amin'ireo zava-tsarotra indrindra nandreseko tamin'ny fiainana dia ny fahafantarana fa amin'ny fotoana voalohany anaovako zavatra dia tsy ho tonga lafatra izany fa ny fiezahana tsirairay ataoko mba hahavitana zavatra dia manakaiky ny fahalavorariana.